ZBN PSA nitrogen Ndinam ngwaọrụ - China Hangzhou poli Air Nkewa Equipment
Arụ ọrụ ụkpụrụ: PSA nitrogen Ndinam ngwaọrụ bụ iji carbon molekụla myọ ka adsorbent, iji ụkpụrụ nke mgbali Ngabiga adsorption (PSA) maka nitrogen akụrụngwa. N'okpuru a ụfọdụ nsogbu, na ojiji nke nitrogen na oxygen na ikuku nke mgbasa ọnụego nke iche iche na carbon molekụla myọ bụ ibu, na carbon molekụla myọ adsorption ọsọ dị ukwuu karịa nke oxygen nitrogen, oxygen bụ carbon molekụla myọ adsorption ihe dị ukwuu, inwetara nke nitrogen ụmụ irighiri na t ...
PSA nitrogen Ndinam ngwaọrụ bụ iji carbon molekụla myọ ka adsorbent, iji ụkpụrụ nke mgbali Ngabiga adsorption (PSA) maka nitrogen akụrụngwa.
N'okpuru a ụfọdụ nsogbu, na ojiji nke nitrogen na oxygen na ikuku nke mgbasa ọnụego nke iche iche na carbon molekụla myọ bụ ibu, na carbon molekụla myọ adsorption ọsọ dị ukwuu karịa nke oxygen nitrogen, oxygen bụ carbon molekụla myọ adsorption ihe dị ukwuu, inwetara nke nitrogen ụmụ irighiri na gas na-adọ, nkewa nke oxygen na nitrogen; N'otu oge ahụ dị ka carbon molekụla myọ oxygen adsorption ike dịgasị na dị iche iche nke mgbali nwere ịrịba iche, belata nchegbu, nwere ike desorption nke carbon molekụla myọ adsorption oxygen, carbon molekụla myọ imu, ikwugharị egweri.
Iji abụọ ma ọ bụ karịa elu adsorption ụlọ elu usoro, site na iji nkà na ụzụ nke PLC omume akara ụlọ elu-emepụta nitrogen adsorption, na desorption ụlọ elu imu, cycles, na-aga n'ihu mmepụta nke elu àgwà nitrogen.
, Ala oriri ike, anụ arụmọrụ, ike ime mgbanwe, ngwa ngwa, gas mkpụrụ na-adị ọcha nke mgbanwe;
Inyocha ngọngọ Ọdịdị imewe, mwekota, echichi, adaba arụ ọrụ, obere ohere;
, Mfe ọrụ, ọgụgụ isi akara, na ike na-aghọta unmanned ọrụ;
, Poli pụrụ iche ụgbụgbọ mmanụ mejupụtara bed ụdị mgbe nile ugbu a mgbasa Usoro, ikuku ugbu a na-achụ mgbe niile, iji hụ na molekụla myọ adsorption arụmọrụ;
Special mgbali nchedo ngwaọrụ, prolongs ndị ọrụ ndụ nke carbon molekụla myọ;
Ịmụta ama ika nke pneumatic valves, na ngwá ọrụ na-enye nkwa;
Erughị eru nitrogen akpaka nsị ngwaọrụ, iji hụ na àgwà nke okokụre ngwaahịa nitrogen;
A dịgasị iche iche nke kpatara nchoputa na oti mkpu ma nhazi ọrụ;
Nhọrọ ihuenyo mmetụ nwoke-igwe interface, agbanwe ike na-azọpụta akara na igirigi mgbe nchọpụta, DCS nkwurịta okwu, wdg
Nitrogen mmepụta: 1 ~ 3000 nm3 / h
Nitrogen gas-adị ọcha: 95% ~ 99,999%
The nitrogen mgbali: 0,1 ~ 0,8 MPa (mgbanwe)
Nitrogen gas igirigi uche: 40 ℃ ~ 70 ℃
Previous: ZBO PSA oxygen amụba ngwá
Next: ZBO oxygen mma combustion ngwá
Air Oxygen Nkewa Plant
Air nkewa Equipment
Air nkewa Plant
Air Nkewa Plant Mechanical Equipment
centrifugal Airflow myọ Nkewa Equipment
Cryogenic Equipment N'ihi Air Nkewa Plant
PSA Air Nkewa Plant
Solid-Liquid Nkewa Liquid Gas separator
VPSA agụụ Oxygen generator
ZAS elu arụmọrụ mmanụ-mmiri separator
ZBN-3000E nitrogen Ndinam ngwá
80 cubic Micro okpomọkụ ihicha unit
ZBO PSA oxygen amụba ngwá